कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- 'संसद्‌मा घुर्की चल्दैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- 'संसद्‌मा घुर्की चल्दैन'
ललितपुर — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख-उपसभामुखको विषयलाई लिएर संसद्‌मा बखेडा ननिकाल्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का इन्जिनियरहरुको एकता घोषणा कार्यक्रममा शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख-उपसभामुख निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने अनि अहिले एउटै पार्टीका हुनुहुँदैन भन्न नमिल्ने बताए ।
'सभामुखमा उहाँहरुले उम्मेदवारी नै दिनु भएन। अहिले एउटै पार्टीका सभामुख, उपसभामुख हुँदैन भन्नुहुन्छ। उम्मेदवारी दिएको भए सकिन्थ्यो त्यतिबेला' उनले भने, 'भइसकेपछि कोही एकता गर्छ, कोही कता जान्छ, त्यसले असर गर्ने होइन' प्रधानमन्त्री थपे, 'घरमा घुर्की चल्छ, पार्लियामेन्टमा घुर्की चल्दैन।'
स‌ंसद् नियमावली, संविधानअनुसार चल्ने भन्दै उनले विभिन्न बाहनामा अब अवरोध नहुने बताए। 'पार्लियामेन्टमा निहुँ खोजेर चल्न नदिने होइन, दुई/तीन जना उठेर पार्लियामेन्ट अवरोध हुँदैन' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, 'यो पार्लियामेन्ट असफल हुनका लागि बनेको होइन।' जनताको म्यान्डेट पाएको संसद् भएकोले अब यसले आफ्नो काम अगाडि बढाउने समेत उनले स्पष्ट पारे। 'पार्लियामेन्टले कानुन पास गर्छ, अगाडि बढ्छ। यो जनताको म्यान्डेट हो, जनम्यान्डेटको खिलापमा दुई/चार जना मिलेर गलत उद्देश्य पूरा गर्न खोजियो भने, त्यो हुँदैन, सहँदैन।'
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संविधानअनुसार सभामुख-उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने माग सं‌सद्‌मा उठाइरहेको छ। तर, सत्तामा रहेका नेकपाले एकीकरण पूर्व नै सभामुख-उपसभामुख निर्वाचित भएकोले केही असर नगर्ने बताइरहेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि सभामुख-उपसभामुखका विषयमा संसद्‌मा प्रश्न उठेको हो। सभामुख कृष्णबहादुर महरा तत्कालीन माओवादी र उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्र निर्माणमा सबैले योगदान गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। 'हाम्रा कतिपय मतभेद होलान्। तर, राष्ट्रनिर्माणमा, सुशासन दिने कुरामा, देशलाई थितिमा हिँडाउन, आर्थिक समर्द्धितिर लान र राष्ट्रिय एकता बनाउने कुरामा कमसेकम सहकार्य गरौं' उनको भनाइ थियो।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीका सबै तह एकताको चरणमा भए पनि पार्टी एकढिक्क रहेको दाबी गरे।
कांग्रेसको अबको मुद्दा : ‘फरक दलका सभामुख र उपसभामुख’
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १८:४१
बाघ गणना प्रतिवेदन लुकाइँदै
चितवनमा बाघ घटे
श्रावण १२, २०७५ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चेर तयार पारेको बाघ गणनासम्बन्धी प्रतिवेदन गोप्य राख्ने भएको छ ।
सन् २०१३ मा भन्दा बाघको संख्या घटेपछि तथ्य लुकाउन खोजेको हो।
पछिल्लोचोटि करिब १० महिना लगाएर गरिएको गणनामा चितवन निकुञ्जमै बाघको संख्या १५ वटाभन्दा बढीले घटेको पाइएको छ। बाघ र आहार प्रजातिको गणनाले बाघको धेरै संख्या रहनेमा पर्छ चितवन निकुञ्ज।
निकुञ्ज विभागको तथ्यांक अनुसार ५ वर्षयता पर्सादेखि शुक्लाफाँटा निकुञ्जसम्म ३३ वटा बाघ प्राकृतिक कारणले मरेका छन्। तीमध्ये बढी चितवन निकुञ्जमा १७ वटा मरेका छन्। ११ वटा प्राकृतिक कारणले र अन्य विद्युतीय पासो र विष हालेर मारिएका हुन्। बर्दिया निकुञ्जमा पनि प्राकृतिक हिसाबले ११ बाघ मरेका छन्। तर, गणनामा बर्दियामा अघिल्लोपटकभन्दा बढी बाघ पाइएका छन्।
सन् २०१३ को गणनाअनुसार चितवन निकुञ्जमा १ सय २० बयस्कबाघ थिए। यसपटक एक सय हाराहारी मात्र पाइएको उच्चस्रोतले जनाएको छ। तर, यो तथ्य बाहिर ल्याउन खोजिएको छैन।
बाघको संख्या बढाउन ५ वर्षयता दातृ निकायले समेत करोडौँ रुपैया खर्चेका छन्।
जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल नेपाल) र डब्लूडब्लूएफ नेपालले बाघ र तिनका आहार प्रजातिको संरक्षण, भौतिक संरचना निर्माण र चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
विज्ञहरू सम्मिलित प्राविधिक टोलीले चितवनमा बाघ घटेको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयका अधिकारी झस्किएका थिए। यसै कारण उनीहरुले आइतबार विश्व बाघ दिवसका दिन सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्न खोजेका हुन्। त्यसप्रति बाघ गणना र तथ्यांक विश्लेषणमा सहभागी विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
चितवन निकुञ्जमै बाघ घटेको तथ्य बाहिर ल्याउँदा नकारात्मक सन्देश जाने र आलोचना हुने भन्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिएको हो। प्रतिवेदनबारे केही नबोल्न प्राविधिकहरुलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले बाघको तथ्यांक विश्लेषण चलिरहेको दाबी गर्दै घुमाउरो पारामा प्रतिवेदनप्रति आशंका व्यक्त गरे। ‘एसईई रिजल्टको जस्तो समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर तथ्यांक विश्लेषण जारी राख्न खोजिएको हो,’ उनले भने।
बाघ गणना र तथ्यांक विश्लेषणको सबै जिम्मा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले लिएको थियो। विभाग महानिर्देशक मनबहादुर खडाले बाघ दिवसका दिन नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने धोको अधुरै रहेको बताए। ‘हेर्नुस् यो धेरै गाह्रो काम रहेछ’ उनले भने, ‘संख्या बाहिर ल्याउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।’
चितवन निकुञ्जमा बाघ घट्नुमा कतिपय विशेषज्ञले पर्सा र चितवन निकुञ्जसँगै भारततर्फको वाल्मीकी टाइगर रिजर्भ हुनुलाई कारण मानेका छन्। सीमा सँगै भएकाले बाघ दुवैतिर ओहोरदोहोर गर्ने र नेपाली बाघ बाल्मिकीतिर गएको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। उता पनि बाघको गणना सकिएको छ।
पर्सा, बर्दिया र बाँके निकुञ्जमा भने संख्या बढेको प्राविधिकहरुको भनाई छ। नेपालका पाँचवटा निकुञ्जमा बाघ पाइन्छन्। हरेक पाँच वर्षमा गणना गरिन्छ। सन् २०१३ मा पर्सादेखि शुक्लाफाँटासम्म बयस्क बाघको संख्या १ सय ९८ थियो।
पछिल्लोचोटि विभागको अगुवाइमा मंसीर १४ देखि थालिएको गणना फागुनमा सकिएको थियो। यस क्रममा क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट बाघको तस्बीर लिइएको थियो। गणना सहज बनाउन पर्सा निकुञ्जदेखि शुक्लाफाँटा निकुञ्जसम्मको क्षेत्रलाई पर्सा–चितवन कम्प्लेक्स, बाँके–बर्दिया कम्प्लेक्स र लालझाडी–शुक्लाफाँटा–जोगबुढा कम्प्लेक्समा विभाजन गरिएको थियो। निकुञ्जभित्र नपर्ने वन क्षेत्रमा पनि गणना गरियो।
विभागका इकोलोजिस्ट लक्ष्मण पौडेलका अनुसार गणनामा ६ सय जोडी (१२ सय) क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो। प्राविधिक टोली संयोजक एवं निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईका अनुसार स्वचालित क्यामेराले ८ हजारवटा तस्बिर कैद गरेका थिए।
दोब्बर पार्ने घोषणा
विश्वमा १३ देशमा बाघ पाइन्छ। सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशका सरकार प्रमुखहरुको सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनले सन् २०२२ सम्म विश्वभर बाघको संख्या ३५ सयको दोब्बर पार्ने संकल्प गरेको थियो। नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए। त्यति बेला नेपालमा बाघको संख्या १२१ थियो। सन् २०२२ सम्म नेपालले २५० पुर्‍याउने संकल्प गरेको थियो। बाघको संख्या बढाउने उद्धेश्यले सरकारले बाँके निकुञ्ज घोषणा गरी पर्सा निकुञ्जलाई विस्तारसमेत गरेको छ।
सन् २००८ : १२१
सन् २०१३ : १९८
सन् २०१८ : २०० प्लस
सन् २०२२ : २५० प्लस
कहाँ कति? (२०१३ को गणनाअनुसार)
चितवन निकुञ्ज १२०
बर्दिया निकुञ्ज ५०
शुक्लाफाँटा निकुञ्ज १७
पर्सा निकुञ्ज ७
बाँके निकुञ्ज ४
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १८:३५
देश जोगाउने पालो कांग्रेसको : देउवा
विशेष शिक्षक लाइसेन्स र विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर : विज्ञ
मर्यादाक्रमप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति
मेलम्ची आयोजना : सीएमसीसँगको करार रद्द गर्ने सरकारको तयारी